Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana: Tsy hahazo milatsaka izay tsy kandidàn’antoko pôlitika ?
Fifidianana: Tsy hahazo milatsaka izay tsy kandidàn’antoko pôlitika ?
Hatramin’izao volana febroary 2018 izao dia mbola tsy misy mangirana ilay lalàna izay hifehy ny fifidianana izay hatao amin’ny faran’ny taona raha ela indrindra. Efa hatramin’ny volana aogositra 2017 no tsy nitsahatra ny fangatahan’ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka mahakasika ny hamoahan’ny governemanta ny volavolan-dalàna amin’izay ka hampandalovina eny amin’ny Antenimierampirenena eny Tsimbazaza holanian’ny depiote na tsia. Nanantena ny rehetra fa ny fivoriana ara-potoana ataon’ny solombavambahoaka tamin’ny volana novambra sy desambra 2017 iny no hahafantarana izany nefa indrisy fa tsy mety mamoaka izany ny fitondram-panjakana tarihin’ingahy Hery Rajaonarimampianina. Ny volana janoary 2018 raha nisy ny fifampiarahabana nahatratra ny taona dia fanambarana am-bava ihany no nataon’ny filohan’ny repoblika fa tsy maintsy misy ny fifidianana filoham-pirenena amin’ity taona ity. Niala tamin’ny heviny izy ireo satria saika hampanao fitsapan-kevi-bahaoaka amin’ny Lalàmpanorenana aloha mba hahazoana manitatra ny fotoana hitondrana sy ny hitadiavana tetika maloto hahazoana fandresena indray amin’ny fifidianana io. Mafy loatra ny fanoherana izany tamin’izany na avy eto Madagasikara na avy amin’ny mpiara-miasa avy any ivelany ka nandamoka izany.
Tamin’ity herinandro ity dia efa mihamaro ny depiote no tonga indray eto Antananarivo na dia mbola tsy misy fivoriana aza. Raha ny voalazan’izy ireo dia manaraka akaiky ny raharaha pôlitika fa indrindra ny mahakasika ny lalàm-pifidianana izy ireo.
Mandeha dia mandeha ny resaka fa tsy mahazo milatsaka hofidiana intsony izay kandidà tsy miankina manomboka izao. Ho an’ny filoham-pirenena aloha ary hampiharina any amin’ny depiote koa izany. Depiote iray izay akaiky ny fitondram-panjakana no nilaza izany omaly raha mifanazava ny mahakasika ny lalàm-pifidianana ity izy ireo. Raha izay marina no mitranga dia mbola handika ny fifanarahana iraisam-pirenena tany Génève tamin’ny desambra 1948 momba ny zon’olombelona ny fanjakana ankehitriny, toa izany koa ny demôkrasia, ary ny Lalàmpanorenana Malagasy izay misy amin’izao fotoana izao. Ho fandikan-dalàna indray hataon’ity fanjakana entin’ingahy Hery Rajaonarimampianina ity indray izany.
Tsy hisy intsony izany ny filatsahana hofidina amin’ny alalan’ny fikambanana tsotra izay voalaza ao amin’ny lalàna 60 133. Toa izany koa ny filatsahana amin’ny anaran’ny tena manokana izay nahazatra teto hatramin’izay.
Ankoatr’izany dia mbola voaresaka ihany koa ny fanakanana ankolaka na mivantana ireo kandidà atahoran’ny fanjakana HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) ka isan’izany ny filatsahan’ingahy Andry Nirina Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Raha ny ady hevitra mipetraka ao amin’ireo solombavambahoaka dia hosakanana amin’ny fomba rehetra koa ny tsy hahazoan’izy roalahy ireo milatsaka amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ity taona 2018 ity.
Ho hitantsika ny mety ho fahamarinan’ity ady hevitra be amin’ny samy mpitondra fanjakana ankehitriny ity. Mandeha dia mandeha koa ny resaka fa maro no antoko pôlitika hofoanana. Midika izany fa antoko 10 raha be indrindra no handray anjara amin’ity fifidianana ity. Ho hitantsika ny tohiny.